Google Assistant na-achọpụtazi abụ dị ka Shazam | Akụkọ akụrụngwa
Shazam bụ usoro njirimara ọrụ ịsụ ụzọ kpamkpamAjula m otu o si eme ya ugbu a ma obu otu o si mee ya na mbu, mana obere sekọnd nke egwu zuru ezu iji mata ya ma nye anyi ozi niile di nkpa ka anyi wee gee ya nti oge obula na ebe anyi choro . Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ n'oge ahụ na ọtụtụ n'ime anyị na-aga n'ihu taa.
Typesdị ikike ndị a na-eme ka ọtụtụ echiche dị na ndị na-enyere aka dị ka Siri. Ugbu a Google Assistant egosiwo na ọ ga-enwe ike ịchọpụta egwu ngwa ngwa naanị site na ịge ha ntị. Nzọụkwụ ọzọ Google nwere iji meziwanye onye enyemaka ya nke dị n'ọtụtụ ekwentị na ụwa niile.
Ruo ugbu a ọ bụ akụkụ pụrụ iche nke Google Pixel 2 na Pixel 2 XL, ma ugbu a, ọ ghọọla na ngwaọrụ niile ndị ahụ na-akwado nnyemaaka nke Google. Site ugbu a gaa n’ihu, ọ ga - enyere anyị aka ịmata egwu ọ bụla na - akpọ ma igwe okwu nwere ike ịchọpụta, maka nke a ka anyị ga - ajụ onye enyemaka Kedụ egwu na-akụ? ma nye anyị ozi dị mkpa, maka nke a, anyị ga-enweta ụdị kaadị ozi na aha egwu ahụ, njikọta na YouTube na onye na-ese ihe.
Ugbu a na-abịa akụkọ ọjọọ, n'ihi na ugbu a, ọrụ a amachibidoro United States of America, anyị amaghị oge ọ ga-ewe iji gbasaa na mpaghara ndị ọzọ ebe Google na gam akporo na-arụ ọrụ n'ozuzu, anyị chere nkenye ọnọdụ nke a arụ ọrụ ọhụrụ ga-adị mma na nwayọ nwayọ, yabụ enwela olile anya (ọ ga-adị mfe ịhapụ ya ịtụle usoro mmelite gam akporo) wee nye ya ụbọchị ole na ole adịghị anya ị ga-enwe ike ịchọpụta egwu niile ịchọrọ site na Google Assistant na ekwentị gam akporo gị ọ ga-abụ njedebe nke Shazam? Anyị ga-agwa gị site na Twitter mgbe ọrụ ahụ na-arụ ọrụ, ebe ị nwere ike ịga na AndroidSIS.com ịmụtakwu banyere isiokwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Onye enyemaka Google na-achọpụtazi abụ dị ka Shazam
iFixit na-eme nbibi nke iPhone X ohuru na ihe ijuanya a n’ime